उत्तरआधुनिकताको क्यानभासमा - शखदा साहित्य
कथाकार दिवाकर नेपालीज्यू– देशमा ठूलो जनक्रान्ति भयो । सामन्तीसंस्कारको ठूलो पर्खाल ढल्यो । समयले खोजेको कुरा भयो । राणाकालीन निरंकुश शासनले पालनपोषण गरेको सामन्तीसंस्कार पंचायती व्यवस्थामा अझ हलहल बढ्दै गएको थियो । बहुदल व्यवस्था आएपनि निरंकुश राजतन्त्रले यस संस्कारलाई अझ बुई चढाएर हिँड्यो । देशमा दलित, नारी, जनजाति पिडीत र शोषित अवस्थामा नै रहे । माओवादीले युद्धक्रान्तिद्वारा सामन्तीसंस्कारको विरुद्ध नारा लगायो । नारा ठीक थियो तर तरीका गलत थियो । किनभने हतियारले हतियार जन्माउँछ । विचारले विचार जन्माउँछ । यहाँ विचारको क्रान्ति हुनुपर्दथ्यो जसले स्थायित्व र युगीन चेतनाको प्रवाह गर्न सक्थ्यो । यद्धपि युद्धक्रान्तिद्वारा माओवादीले देशमा चाँडै नै ठूलो राजनैतिक र सामाजिक परिवर्तन गर्न सफल भयो । तर विचारको क्रान्ति अपरिहार्य छ । देशमा आएको यत्रो राजनैतिक क्रान्तिको असर सम्पूर्ण तह र तप्काका मस्तिष्कमा पसिसकेको छ । आज चारैतिर अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध आवाज उठिरहेको छ । यो समयको माग हो । समयको चेतना हो । समयको सङ्क्रमण हो । सत्य सधै छोपिरहन सकिँदैन । ब्राद्माणवाद, सामन्तवादको आवाज देशभित्रबाट मात्र हैन देशबाहिरबाट नै बारम्बार उठेका प्रश्नहरू हुन् । आज कतिपय प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् । यस्तै प्रश्नका ठेलीमा छोपिएको एउटा पात्रको सत्य कथा मस“ग छ ।
उक्त पात्रको कथा यसरी उद्बोधन हुन्छ–एक्काइसौँ शताब्दीमा गुज्रिरहेको युग, उत्तरआधुनिक कालको युग, विश्वले अनेकौँ प्रगतिको फड्को मारेको युग हामी अनुभूतिका ठेली बोक्नेहरू नै खाली हात हिँड्छौँ भने नबोक्नेहरूबाट के आशा गर्नु ? त्यसैले कथाकार अनामिकाज्यू मैले मेरो सत्यलाई मभित्र मात्र सीमित नराखी सबैको अगाडि परावर्तित गर्ने आँट गरेँ। किनभने यो समयको माग पनि हो । अहिले त्यहीँ सत्यका बीउ मेरो स्मृति बिम्बबाट एकाकार भई साहित्यका खेतीमा हलहल हुर्दै हुर्कदै गएका छन् । कृपया यो मेरो कथा सार्वजनिक गरिदिनु होला ।
मैले काम गर्ने एनजीओ जहाँ अनाथ बालबच्चाहरूलाई हुर्काइन्छ र पढाइन्छ तर अनाथ मानसिकता बोकेकाहरूले हाँकेको समुदैी जहाज । सामन्तीसोचमा हुर्केको मेरो संस्थामा मैले एउटा अपराधिक कार्य गर्न पुगेँ । त्यो थियो बालपुस्तकको विमोचन कार्यक्रम । उनीहरूको कार्यक्रमको रासायनिक पदार्थसग घुममिल हुनसक्ने कार्यक्रम कसरी अपराधिक भयो भन्ने कुराको निक्योलपछि मात्र मलाई भयो । आफ्नो डम्फुमात्र सर्वेसर्वा, उत्कृष्ट र अलौकिक ठान्ने त्यस संस्थाका डम्फुवाललाई मेरो डम्फुले धेरै परसम्म हुत्याइदिन्छ भन्ने डर थियो क्यारे । तर मेरो स्वच्छ र निष्पक्ष दृष्टिले यो सब देख्न सकेन । त्यसैले मैले मेरो यो कार्यलाई जीवनमा गरिएको सबैभन्दा ठूलो अपराधिक कार्य हुन पुग्यो ।
उनीहरूको कार्यक्रमा मेरो बालपुस्तक विमोचन गोरुको मुखमा लगाइएको मखुण्डोसरह भयो । मेरो पुस्तक विमोचन कार्यक्रम सङ्मणकालमा शाही सरकारले निर्दोष जनतालाई गोली, नेली, र जेली ठोकेर दमनयुक्त जाँतोमा पिल्साएर अधमरो पारेझैँ भयो । मेरो लेखकीयता अस्तिŒववोधको पीडाले इराकमा नेपाली जनतालाई अपहरणकारीले विभत्स हत्या गरि तडपाईतडपाई मारेझैँ भयो । तर मेरो लेखकीय अन्यायमा न कुनै जुलुस भयो न कुनै नारा न कुनै समर्थन भयो । मेरो लेखकीय भावाना मभित्र आक्रोश, पश्चाताप र प्रतिसोधका नारा जुलुस लिएर उफ्रियो म आफूसँगै । त्यसले मलाई ठूलो व्यक्तिगत क्षति ग¥यो । महिनौ दिनसम्म आगोमा अधमरो भएर पिल्सिएझैँ पिल्सिरह्यो मेरो आत्मा । मेरो लेखकीय आत्मा सामन्ती सोचको सुत्केरी वायूले महिनौँ दिनसम्म सास फेर्न पनि गारो हुनेगरी अठ्याइरर्यो, अहरो पारिरह¥यो । पछि पत्रपत्रिकामा विमोचित पुस्तकसम्बन्धी चचा परिचर्चाले झारफुकेको काम गरेछ क्यार त्यसपछि चाहिँ सास फेर्न सजिलो भयो ।
तर कथाकार अनामिकाज्यू, लेखकीय मनोरोगले वर्षौ मलाई सताईरह्यो । सामन्तीसोचमा हुर्किएको हाम्रो समाजमा स्वाभिमानका हिमायतीहरूले सजिलै चौतारी कहाँ भेट्छन् र ? यसअघि नै मैले संस्थामा विभिन्न प्रकारको प्रशासनिक सङ्कट र अप्ठेरापक्ष झैल्दै आएकी थिएँ । कुरो थियो बहुदल व्यवस्था आइसकेको बेलाको । तर मेरो संस्थालाई पञ्चायतकालीन राजसी टाठबाठको आवरणले ढकमक्क पातलाई पूmलले ढाकेझैँ ढाकेको थियो । पञ्चायतकालीन दम्भको शिकार मेरो संस्थाका हाकिमहरू संस्थाका सर्वेसर्वा भनौँ महाराज नै हुन्थे । त्यहाँ कुनै नियमकानून थिएन । थियो त हाकिमका ब्रद्मस्त्रझैँ प्रहार हुने वचन । जसलाई काट्न कुनै अर्को हतियार बनेको हुँदैनथ्यो । नियमकानून उनको मुखमा नै हुन्थ्यो जसलाई काट्ने चराचुरुङ्गी, पशुपन्छी, रूखविरुवा कसैले हुर्मत हुदैनथ्यो । हाकिमका दुई चारवटा चमचाहरू खटिएका हुन्थे । जसका काम हाकिमका बत्तिस लक्षणको बखान गर्नु परमपिता परमेश्वर र अन्नदाताका स्तुतिगान गर्नु र त्यो स्तुतिगान अन्य कर्मचारीलाई कण्ठस्थ गराउनु हुन्थ्यो । अन्य निमुखा, लाचार, अनभिज्ञ जनताहरू तिनै तेलधसुवाहरूको षडयन्त्रभित्र चिम्लेर ज्ञानता, वास्तविकता र स्वाभिमानको सँधारमा पुग्नै सक्दैनथे । पुग्नखोज्नलाई पनि जबरजस्ती हुत्ताएर, लत्याएर, घचेट्याएर साम, दण्ड भेद, निति अपनाएर यता न उताको पारिन्थ्यो । वास्तविक नियमको अनभिज्ञतामा ती लाचार र अधमराहरू बेरोजगारको धारिलो तरवारले छिन्ला कि छिन्ला की भनी तेलधसुवाहरूको तेल धसुवायीमा मजबुर हुन्थे ।
कुरो थियो देशमा जनयुद्ध सुरु हुनुअघिको–त्यससमय मेरो गौरवशाली संस्थामा महिनौपिच्छे जस्तो भव्य पार्टी हुन्थ्यो । राजसी व्यञ्जनले भरिपूर्ण उक्त पार्टीमा जिल्लाका वरिष्ठ सरकारी गैरसरकारी कर्मचारीहरू र धेरैजसो आप्रावासी भारतीय व्यापारीहरूको ठूलै खातिरदारी हुन्थ्यो । डलरहरू मध्यरातसम्म ब्याकलेवल, र चिकनचिलीमा गीत र चुटकिला भएर बगिरहन्थे । जब देशमा जनयुद्ध छेडियो सामन्तीको खुट्टासँगै मेरो संस्थाका हाकिमहरूको खुट्टा काम्न थाल्यो । अब पार्टीहरू इतिहासका पानामा मात्रै सीमित रहे तर सामन्ती सोचको घोडा अर्कै बाटो भएर बुर्कुसी मार्न थाल्यो । अब अदृश्य भएर मेरा संस्थाका ढोगीहरू भेष बदलेर जोगी भएर योगी देखिन थाले । संस्कार उही थियो , उद्देश्य उही थियो, काम उही थियो तौर तरिका मात्र फरक थियो किनभने सामन्तीसंस्कार विरुद्धको गन्ध मेरो संस्थामा फैलिइसकेको थियो । मैले सोचेँ सायद ईश्वरको अस्तिŒव संसारमा छ । उनैले सहयोग गर्नेछन् । हजारौँ जनताको रगत खेर जाने छैन भने मेरो आत्माको शुद्धताप्रति पनि ईश्वर अनभिज्ञ छैनन् । त्यसैले विमोचित पुस्तकले राष्ट्रिय पुरस्कार प्रा मैले ईश्वरलाई प्रार्थना गरेकी थिएँ । सायद ईश्वरको आस्तिŒव यो संसारमा छ सहिदले रगत बगाएसरि आत्मास्वाभिमानको पीडाले निचोरिएर बगाएको मेरो पुस्तकको रगत पनि खेर जानेछैन त्यसैले मेरो पुस्तकले राष्ट्रिय पुरस्कार पाउनुपर्छ , होइन भने ईश्वरको अस्तिŒव संसारमा मित्था हो । मेरो इहब्रद्माको इजलासले यही फैसला ग¥यो । वास्तवमा ईश्वरको अस्तित्व संसारमा रहेछ । सहिदको रगत खेर जाँदैन भन्ने कुरा इतिहासले पनि देखाएको छ । सत्य सधैँ अमर हुन्छ । सत्यको इजलासले मेरो पुस्तकलाई न्याय ग¥यो । अनि सो पुस्तकले राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त ग¥यो । पुस्तक र लेखनको महत्व नबुझेको मेरो सस्थामा ईश्वरले उज्यालो प्रकाश छर्नु भएको थियो ।
रसियामा क्रान्ति नभएको भए म्याक्सिम गार्कीले आमा लेख्दैनथे होलान् । दोस्रो विश्वयुद्धमा धेरै बालबालिका अनाथटुहुरा नभएको भए हर्मन माइनर जन्मदैनथे होलान् । तारानाथ शर्मालाई अङ्ग्रेजी पढ्न नआउदा कसैले गाली नगरेको भए उनी अङ्ग्रेजी ज्ञाता हुदैनथे होलान् । सायद मैले पनि मेरो संस्थामा लेखकीयता विरक्तता, उपेक्षा, अपमान र अपहेलना नपाएको भए साहित्यमा यति रप्तारका साथ सगरमाथाको उकालो लाग्ने थिइन् हु“ला । तल हेर्दा कहालीलाग्दो भीर उभो हेर्दा नाक ठोक्किने पहरा कति अत्यासियो होला यो जीवन कति निस्सासिए हुँला † सहाराविहीन यात्रा, हिमालको भोटे छोराझैँ अक्सिजन विनाको हिमाली यात्रा–चुचुरोमा पुगेर सफलताको झण्डा गाड्नुपर्ने चुनौतिले कति सास्ती फेरे हुँला † जीवनलाई दाउमा राखेर कति सङ्धर्षमा लागिपरे हुलाँ । तर ईश्वरको पयार्यवाची नाम भनेको सायद साधाना, सहनशीलता, र लगनशीलता रहेछ । सगरमाथा नै नभनौँ कुनै सानो चुचुरामा पुगेर मेरो सफतलाले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरको झण्डा फरफराउन सफल भयो ।
कथाकार अनामिकाज्यू, सत्यवादितालाई असत्यवादिताले पोलेजस्तै असत्यवादितालाई सत्यवादिताले पोल्दोरहेछ । वास्तवमा साहित्यिक सफलताको जाज्वल्यमान ताज असत्यका ती सत्यवादी धर्मभीरुहरूलाई देखाउन ईश्वरले मलाई पहिराउनु भएको थियो । तर त्यो ताजको प्राज्वलीय प्रकाशले ती सत्यवादी धर्मभीरुका आँखा तिरमिराए । त्यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गरेको सो पुस्तकको ज्योति, जसको प्रकटले मात्र उनीहरू अन्धो हुने प्रवल सम्भावाना भएकोले होला कठै ती अनाथ बालबालिका त्यो ज्यातिको सूक्ष्म प्रकाशको आभाष पाउन पनि अभागी ठहरिए । जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ , त्यहाँ ईश्वरको बास हुन्छ । त्यसैले नारीको सम्मान गर्ने मानसिकता नभएको मेरो संस्थामा ईश्वरको बास नभएकोले यो ज्ञान पाएनन् होलान् म भन्छु ।
देशको एउटा सानो संस्थामा सत्य यसरी निमोठिन्छ, निचोरिन्छ भने देशको विशाल भूमिमा कति यस्ता सत्य सहिद हुँदा हुन थाहा नपाई । शासनका ठेक्का लिएका, प्रशासनका ठेक्का लिएका, धर्मका ठेक्का लिएकाहरूको पदचापमुनि कति यस्ता निमुखा सत्यहरू किचिएर सार्वजनिक हुन नपाई मर्दा हुन् । त्यसैले म भन्छु देशमा अझै ठूलो क्रान्ति हुन बाँकी नै छ । धेरै उथुलपुथुल हुन बाँकी नै छ । अबका दिन कोही चूप लागेर बस्ने छैनन् । विचारको क्रान्तिको माग समयले गरिरहेछ । आत्मस्वाभिमानको पाठ सबैले पढ्नुपर्छ ।
परापूर्वकालको सतीप्रथा निर्मूल भए पनि एक्काइसौँ शताब्दीको उत्तरआधुनिक सतीप्रथा नाम दिएकी छु मैले यस प्रथालाई । सायद यो प्रथामा नारीले धेरै बोल्न हुँदैन, धेरै प्रशंसा र पुरस्कार प्राप्त गर्न हुँदैन यदि गरेमा यो किसिमको दण्ड दिइन्छ भन्ने नियम होला । मेरो ब्रद्मज्ञानले यही ठहर ग¥यो । किनभने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पाउँदा संस्थाले बधाईसम्म नदिने कहाँसम्म को विडम्वना थियो ? असत्यको धमिलो वातावरणमा सत्यको दियो जतिसुकै बाल्न खोजे पनि त्यो बल्न धेरै मुश्किल पर्दोरहेछ त्यसैले म त्यहाबाट धेरै टाढा हुन रुचाएँ । आज त्यही दूरीले मलाई यो सत्यको दियो आफूले आफैलाई सात्वाना दिएकी छु किनभने सती प्रथा निर्मूल गर्ने पनि पुरुष नै थिए भनेर र यो उत्तरआधुनिक सतीप्रथा समाप्त गर्ने पनि पुरुष नै हुनेछ भनेर ।
जीवनका यस्तै घात प्रतिघातले मान्छेबाल्न सक्षम पनि बनायो । सतीप्रथाझैँ चितामा नजल्दा घोचीघोची बासले हिर्काएर मारेझैँ संस्था छोडिसकेपछि पनि पाउने सुबिधाहरू कटौति गरेर अपमानजनक पाराले स्वाभिमानको हत्या गरेर आधुनिक सतीप्रथाको संस्कारलाई सुसस्कृत र सुव्यवस्थित पार्न सफल पुरातनवादी धर्मभीरुलाई लाखौँलाखौँ धन्यवाद छ मेरो तर्फबाट । अनिलाई मान्छे बनाउँदो रहेछ । विदाइको समयमा धन्यवाद दिँदै मैले केही उपहार त दिन सकिनँ तर एउटा सानो लेख लेखेर आफूमा भएको असीमित पीडालाई थोरै शब्दमा अटाएर यसरी व्यक्तगर्न मात्र सकेँ –
भोलि म यहाँ नहुन सक्छु ।
भोलि म यहाँ नहुन सक्छु । मेरो उपस्थिति एउटा शुन्यमा बिलाउन पुग्छ । तेह्र वर्ष सात महिना क्यालेन्डरका पाना फेरेका छन् मेरो जीवनले – यस ठाउँमा । महिनाको पहिलो तरिखदेखि नै अभावका सर्पहरू फना फिँजाएर मेरो विवशतालाई डस्न खोजिरहन्थे । धेरै समय बग्यो, थाम्न नसक्ने गरी यस ठाउँमा । जीवन कहिले शरदको हिउँ भएर कठ्याङ्ग्रियो, कहिले प्रकाण्ड गर्मीले पोलेर तडपियो, कहिले सुनामीको छालले तहसनहस भयो । प्रकृतिले झैँ जीवनले सधै सबै सुखदुखलाई आत्मसात गरिर¥यो । यो बाटोमा तेह्रै वर्षसम्म धानका बाला छुपुछुपु गर्दे रोपिए ।। तेहै पटकसम्म लहलह भएर पाकेका धानका बाला काटिए । म फगत एउटा प्रत्येक दिन चक्र खिइएझैँ, प्रत्येक पल प्रत्येक कोठामा खिइँदै गए, घिस्रँदै गए । जीवनले अनेकौं मोड लियो । अनेकौं घटना घटे । अनेकौं दुर्घटना घटे । बाँच्नुको विकल्प अरूनभएपछि
सम्झौताको रजिस्टारम प्रत्येक दिन सम्झौताको रजिष्टारमा हस्ताछर हस्ताछर गर्दै जीव्न
गर्दै जीवनको उपस्थिति जनाइरहेँ ।
फेरि त्यो समय नआउन सक्छ । सफलता र असफलताको केन्द्र बिन्दु बनाएर जीवनले अनेकौं बृतचित्र को¥यो । कैयौं पटक आशा र निराशाहरू छरपस्ट भएर छरिए वृतचित्रभरि । फेरि त्यो दिन नआउन सक्छ । दिनभर प्राण धान्न केही खान नपाउँदा आफूले आफूलाई धिक्कारको, त्यो दिन सायद इयोपियाको अकालमा आफू तडपिएको अनुभूति फेरि म नपाउन सक्छु । धेरै अनुभूतिहरू ओथारो बसेको छन् – यो समय र यो दिनहरूमा । कुनै दिन कोरल्न सकेका ती अनुभूति म आफू कति भाग्यमानी ठान्ने थिएँ हुलाँ । कहिले म हुनुको पिडाले बर्षे झरी बनेर रुझ्दै त्यो बाटो काटेकी छु । कहिले अस्तित्वबोधको पीडा र बेदनाले उकुसमुकुस हुँदा ज्यालामुखी भएर फुटेको छु । कहिले हाँसो र खुसीहरू कतै बन्धक राखी आफूले आफैलाई चिनाएकी छु । कहिले आत्मीयता र हार्दिकताको नाम्लो बाटेर जीवनको भारी बोकेकी छु । म आफू आफू हुँ अरू कोही होइन भन्ने सिद्धान्तमा आफूलाई पगारेकी छु । म स्वयं सम्पूर्ण हुँ त्यसैले कहिले खुसीका सानो किरणलाई जीवनको उज्यालो गोरटो सम्झेर जीवनलाई डो¥याएकी छु । कहिले दुखका विस्कुन फिजाएर सहनुभूतिको रापले सुकाँउदै जीवनलाई लम्बाएकी छु । बाँच्नुको सार्थकता खोज्दै पीडा र संघर्षमा जीवनलाई होमिदिएकी छु । भोलि म यहाँ नहुन सक्छ मेरा स्मृतिबिम्बहरू विस्तारै हराउदै जानेछ । जीवन कतै हराएर कतै उदाउनेछ । मेरो जीवन कहिले शान्त नदी भएर बग्यो । कहिले खहरे भेल भएर बग्यो । समय पहाड भएर सबै दृश्यहरू मुक दर्शक भएर हेरिरह्यो । म एउटा कठिन यात्रामा लागिरहे । यस ठाँउमा मेरो समयले उत्सुकताको बिउ छरेको छ । कहिले इष्र्या र डाहका काँडेझार उलेख्दै प्रशंसा र हार्दिकताको बाली झुलाएको छ । कहिले थकित र गलित जिन्दगीलाई सान्त्वनाको लेपन लगाउदै गतिशील बनाएकी छु । भोलि म यहाँ नहुन सक्छ । मेरा स्मृति पाइलाहरू हराउने छन् । म एउटा इतिहास बन्न सक्छु । तर मेरो जीवनले एउटा लछ्य लिएको छ । म एउटा अस्तित्वविहीन प्राणी भएर हराउन पनि सक्छु अथवा पासाङ ल्हामुझै जीवनलाई चिनाएर मेटिन पनि सक्छु वा पारिजात झैं मगमगाउन पनि सक्छु । भोलि म यहाँ नहुन सक्छ तर म बाँचेको समय यहाँ बाँचिरहन पनि सक्छ ।
कथाकार दिवाकर नेपालीज्यू मेरो पात्रको आत्मकथा यही हो । वास्तवमा नारीलाई सफलता प्राप्त गर्न कति गारो हुन्छ भन्ने कुरा पाठकले थाहा पाउनै पर्छ । आज देशमा जनजाति, दलित, नारीहरूको यस्ता कथाहरू जीवन्त भएर बाचेका छन् । ती कथाहरुलाई हामीले उद्बोधन गर्नै पर्छ । अनि मात्र हामी पूर्ण कथाकार हुन सक्छौँ ।
समकालीन साहित्यमा पनि प्रकाशित पढेर द्रवित भए ।